फिल्म चलेर मात्र होइन, हलमा रिलिज नै नभएर पनि डुब्छन् निर्माता – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsफिल्म चलेर मात्र होइन, हलमा रिलिज नै नभएर पनि डुब्छन् निर्माता
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- फिल्म किन बनाउने ? फिल्म कसका लागि बनाउने ? फिल्म बनाएर के गर्ने ? यी सबै प्रश्नको उत्तर नखोजी फिल्म मेकिङ सुरु गर्नुको अर्थ के होला ?
फिल्म बनाउनुको जम्मा एउटा ध्येय छ, पैसा कमाउनु । हलमा फिल्म लगाएर दर्शकको तारिफ कमाउनु र पैसा कमाउनु । यसैका लागि त एउटा लगानीकर्ताले करोडौ रकम खर्च गरिदिन्छन् ।
निर्माताले करोडौ रकम खर्च गरेको फिल्म हलसम्म आएर दर्शकले हेरिदिएनन् भने पनि चित्त वुझाउने ठाउँ हुन्छ । तर, फिल्म बनाएर विचमै रोकिने वा बनाएर पनि हलसम्म आउन नसक्ने अवस्था भयो भने के होला ? त्यो त नेपाली फिल्मको दुखद पक्ष नै हो । तर, यहाँ यस्ता फिल्म पनि छन् जुन बन्दा बन्दै रोकिए त कतिपय सिनेमा त बनेर पनि हलमा आउन सकेका छैनन् ।
३० प्रतिशत छायांकन हुँदा नै २ करोड सकिएको फिल्म रानी महल अब बन्छ या बन्दैन थाहा छैन । यो फिल्मको छायांकन रोकिएको लामै समय भयो । फिल्मको बजेट नै २ करोड भनेर सुरु गरिएको थियो, तर छायांकन ३० प्रतिशत सकिदा नै २ करोड निर्माताको स्वाहा भयो । फिल्मको छायांकन रोकिएको छ ।
फिल्म कस्मिक लभको हालत पनि उस्तै छ । फिल्मको छायांकन हुँदा हुँदै मुख्य लगानीकर्ता निर्माता भागेपछि यसको छायांकन रोकिएको छ । फिल्ममा समावेश प्रशान्त ताम्राकार र दिया मास्केको कोया कतराको गीत रिलिज भैसकेको छ । तर, डेढ करोड भन्दा बढी लगानी भैसकेको फिल्मको छायांकन रोकियो । अब, यो फिल्म हलसम्म आउन पाएन भने निर्माताको हालत के होला ?
नेपाली फिल्म बनाउनेहरु यति धेरै अपरिपक्क छन् कि, फिल्म बनाउँदा कती बजेट लाग्छ र हलसम्म ल्याउँदा कती खर्च गर्ने भनेर एउटा हिसाब पनि निकाल्न सक्दैनन् । यतिमात्र होइन, धेरै जना त नयाँ निर्मातालाई जसरी हुन्छ मुर्गा बनाइदिउँ भन्ने सोचले फिल्म बनाइदिन्छन् ।
यस्तै, सोचका कारण पनि फिल्मको रिलिज हुन सक्दैन । अशिष्मा नकर्मी र आर्यन अधिकारीलाई लिएर बनाइएको फिल्म जश्मिन कहिले रिलिज हुन्छ पत्तो छैन । फिल्म बनेको लामै समय भैसकेको छ । यसका निर्देशक अर्को फिल्मको तयारीमा लागिसकेका छन् ।
यहाँ बनेर पनि चल्न नसकेका फिल्मको संख्या पनि दर्जन बढी छ । निर्देशक फिल्म पाएको खण्डमा अर्को सिनेमा बनाउन तम्सिन्छन् । फिल्म बनेको ३ बर्षपछि बल्ल बल्ल अनागत फिल्म हलमा आउँदैछ । यो सिनेमा हलसम्म आइपुग्दा यसका कलाकार प्रियंका कार्की र अर्पण थापाको क्रेज नै सकिने क्रममा छ ।
फिल्म सुस्केरा बनेको पनि लामै समय भयो । स्वरुपपुरुष ढकाल र सुरक्षा पन्तको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मको टिजर आइसक्यो । तर, सिनेमा रिलिज कहिले हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन ।
बारम्बार सर्दा सर्दा ऋचा सिंह ठकुरीले बनाएको सुपर गोर्खे फिल्म कहिले रिलिज हुन्छ पत्तो छैन । २–३ चोटी सिनेमाको रिलिज तय गरियो । तर, पछि सारियो । फिल्म बर्दी पनि कहिले रिलिज हुन्छ पत्तो छैन । यो सिनेमाको गीत, ट्रेलर नै सार्वजनिक भैसकेको छ । तर, बारम्बार प्रदर्शन मिति तय गरेर पनि फिल्म चल्न सकेन ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । यहाँ कैयौ फिल्म बन्दा बन्दै रोकिन्छन्, कैयौ फिल्म बनेर पनि हलसम्म आउन सक्दैनन् । यसले, घाटा त लगानीकर्तालाई नै हुन्छ । यसैले फिल्म बनाइसकेपछि हलसम्म रिलिज गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । होइन भने, फिल्मको बारेमा नवुझेर लगानी गरेर फुर्सदमा पछुताउनुको अर्थ छैन ।
richa sing thakuri
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- शुक्रबारबाट ३ वटा नेपाली सिनेमा रिलिज हुँदैछन् । ३ वटा सिनेमा रिलिज हुँदा चर्चा कसको कती छ भन्ने पनि देखिन्छ । चर्चा बटुलेका सिनेमाले इनिसियल व्यापारमा बाजी मार्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो […]